काठमाडौं । प्रायःजसो महिलाहरुको शरिरको छालाभन्दा योनिको बाहिरी छाला फरक हुन्छ । महिलाहरु आफ्नो शरीरको रङसँग योनी बाहिरको छाला किन कालो भएको होला भनेर सोच्ने गर्दछन् । योनीको छाला कालो हुनु र अन्य कुराहरुमा केही सम्बन्ध हुन्छ कि भन्ने उनीहरुको चासो हुन्छ । यौनसम्पर्क गरेर कालो भएको कतिपयले महिलाहरुको सोचाई हुन्छ । तर के यी सोचाईहरु साँचो हुन त ? पुरुषको लिङ् र योनीको बाहिरी...
एजेन्सी। हाम्रो छालामा जिवाणुको कारणले गर्दा ससानो मासु पलाउने गर्दछ । जस्ले हाम्रो छालाको माथिल्लो तहमा असर गर्दछ । जस्ले गर्दा मासु छिटो बढ्ने हुन्छ । साधारणतया गाँठोगुठ्ठि धेरै खतरनाक हुदैंन । गाँठोगुठ्ठि प्रायजसो घाँटीमा आउने गर्दछ । यीनीहरु धेरै नै नराम्रो देखिन्छन् । गाँठोगुठ्ठि सानो मासु झुण्डिएको जस्तो देखिन्छन् । त्यसैगरी मासुको र यसको रङ्ग समान हुन्छ ।...
धेरैजसो हामी आफ्नो पर्समा पैसाको साथै केही अन्य कुराहरु पनि राख्ने गर्छौं । तर धेरैपटक पर्समा राखिने यी वस्तुहरु अशुभ मानिन्छ र हाम्रो सौभाग्यलाई पनि दुर्भाग्यमा परिवर्तन गरेर हामीलाई कंगाल बनाइदिन्छ । आज हामी तपाईंलाई पर्समा कहिले पनि राख्न नहुने वस्तुबारे जानकारी दिँदै छौं । औषधीः पर्समा कहिले पनि औषधी नराख्नुहोस् । वास्तुका अनुसार पर्समा औषधी राख्दा पैसा निकै खर्च...
प्रत्येक राशिको आफ्नै केही भावनात्मक रोजाई र खुबी हुन्छन् । यसै आधारमा केही राशि जो एकअर्काको शत्रु मानिएको छ, त्यस्तै केही राशिहरुमा सम्बन्धमा निक्कै लगाव रहने हुन्छ । राशिमा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ ? गर्नुहुन्छ भने यी कुरा जान्नुहोस्, जुन राशिहरुबीच प्रेम वा विवाह नभए नै राम्रो मानिन्छ । मेष र वृश्चिक एकतर्फी प्रेमले कसरी समस्या उत्पन्न गराउँछ भन्ने कुरा यी दुई राशिको...
हेटौँडा, ३१ असोज, यी बच्ची जहाँ जहाँ जान्छिन् उनलाई मानिसहरुले घुरेर हेर्छन् । उनले जे काम गर्छिन् मानिसहरुले अनौठो नजरले हेर्छन् । कारण यत्तिमात्र हो की उनको अनुहार पूरै भुत्लाले ढाकिएको छ । सोही कारण मानिसहरुले उनको नाम नै बदलेर बाँदरमुखे अर्थात् मंकी फेस राखिदिएका छन् । यिनको वास्तविक नाम सुपात्रा सासुफान हो । थाइल्याण्डको बैंकककी सुपात्राको अनुहार साधारण मानिसको...
आज भन्दा सय बर्ष अघि मार्गरेट गीर्तोइदा जेले अर्थात् माता हारीलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । उनलाई ५० हजार मानिसको मृत्युका लागि दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड दिइएको थियो । उनले आफ्नो सौन्दर्यको फाइदा उठाउँदै फ्रान्स र जर्मनीका लागि दोहोरो जासुसी गरेकी थिइन् । उनी चर्चित नृत्यांगना समेत थिइन् । पहिलो विश्वयुद्धका क्रममा उनी पेरिसमा नृत्यांगनाका रुपमा प्रख्यात थिइन् । उनको...
हेटौँडा, २९ असोज, विज्ञानले विहान स्वास गनाउने समस्यालाई ‘ह्यालिटोसिस’ ९ज्बष्तियकष्क० भन्छ। दाँत सफा नगर्ने बानीले गर्दा, सुत्ने तरिका नमिल्दा अनि केही खानेकुराह खाँदा विहान स्वास गनाउने गर्दछ। राति सुत्दा मुख सुक्खा भयो भने पनि स्वास गनाउने गर्दछ। हुन त दुर्गन्धित स्वास हुनुका कारणहरू थुप्रै छन्, तर त्यी समस्यालाई समाधान गर्ने तरिकाहरू पनि पक्कै थुप्रै...
हेटौँडा, २९ असोेज, सुनचाँदीलाई त मानिसले लकर वा सेफमा राख्छन् जतन गरेर । तर यो दुनियामा एउटा यस्तो देश पनि छ ढल तथा नालीमा सुन बग्दछ । दुनियाको सबैभन्दा सम्पन्न देशहरु मध्येको एक स्विजरल्याण्डमा हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ मूल्य पर्ने सुन ढलमै बगाइन्छ । हालैको एक रिपोर्टले यो कुराको खुलासा गरेको छ । शोधकर्ताहरुले जब ढलमा रहेका ठोस फोहोर निकालेर ती फोहोर छुट्टाएर अध्ययन गरे ।...
एजेन्सी, हामीले अंग्रेजी महिनाको नाम त सुनेकै छौ।तर ती १२ महिनाको नाम सरी रह्यो भन्‍ने बारेमा रोचक तथ्य रहेको छ। ती यस प्रकार रहेको छ। जनवरी जेनस एक ग्रीक देवता हो जसलाई २ अनुहार रहेको छ। एउटा अगाडि अर्को पछाडि हुने गर्दथ्यो। दोस्रो अनुहार पछि र यसैको नाम जनवरी राखिएको थियो। पटि यही नै जनवरी भएको हो जुन अहिलेसम्म गुज्रिरहेको छ । फेब्रुअरी यो महिनाको नाम फेब्रुआलिया नामको...